एमसीसीको विपक्षमा आवाज उठाउने यी हुन् नेकपाभित्रका नेताहरू ! - Sidha News
एमसीसीको विपक्षमा आवाज उठाउने यी हुन् नेकपाभित्रका नेताहरू !
काठमाडौं। नेकपाभित्र एमसीसी पारित गर्न नहुनेमा चर्काे आवाज उठाउने नेता हुन्– स्थायी समिति सदस्यत्रय भीम रावल, देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेल । उनीहरूको तर्क छ, एमसीसीले राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा पार्छ।
अमेरिकाले दिने सहयोगको लोभमा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई भुल्न सकिँदैन । ‘हाम्रो स्वाधीनतालाई अमेरिकाले दिने सहयोगसँग तुलना गर्न सकिँदैन। संविधानमै कुनै पनि सैन्य गतिविधिमा सहभागी नहुने स्पष्ट छ’, स्थायी समिति सदस्य रावल भन्छन्, ‘स्वाधीनता खतरामा पर्ने गरी सहयोग स्वीकार्न सकिन्नँ ।’